धनकुटा खबर । धनकुटा अस्पतालले मुलघाट स्थित बिश्रान्ति बृद्धाआश्रममा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सन्चालन गरेर बृद्धाबृद्धाहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरेको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत आश्रमका ६० जना
एजेन्सी । बच्चालाई ३ वर्ष सम्मको उमेरमा जे खुवाईन्छ त्यो उसको पूरै जीवनको आदतमा सिधै असर हुन्छ । त्यसैले ३ वर्षको बच्चालाई के खुवाउने र नखुवाउने यो जान्न एकदमै जरुरी
चितवन– युएस–बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा वरिष्ठ न्युरो सर्जन बालकृष्ण थापाको निधन भएको छ। डा थापा भरतपुरको चौबिसकोठीमा रहेको चितवन अस्पताल प्रालि तथा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत थिए। बंगलादेशमा
चितवन, २८ फागुन । भरतपुर अस्पतालले आफैले प्लान्ट निर्माण गरी अक्सिजन उत्पादन गर्न शुरु गरेको छ । दुई वर्ष अक्सिजन खरिद गर्न लाग्ने खर्चले प्लान्ट नै निर्माण भएको हो ।
एजेन्सी । मृत्यु हुनुभन्दा ठीक अगाडि मानिसको दिमागमा के हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिसँग यसको सटिक जवाफ छैन । वैज्ञानिकहरुसँग केही जानकारी अवश्य नै छ, तर यो प्रश्न ‘सेक्रेट’
एजेन्सी । उमेर बढ्दै जाँदा ढाड दुख्छ तर गलत तरिकाले उठ्ने बस्ने गर्दा, चोट लाग्दा, खानपानमा गडबडी, गर्भावस्था र अन्य कारणले पनि ढाड दुख्न सक्छ । ढाड दुख्दा मांसपेशी तन्किने,
थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ । यो ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइराइडको खास काम
कन्डमबिना गर्भ नरहने गरि यौनसम्पर्क कसरी गर्ने ?
हाम्रो समाजमा बिबाह गरे पछी श्रीमान श्रीमती दुवैलाइ जति सक्यो चाडों सन्तान जन्माउनु पर्ने दबाव हुन्छ । कुनै कुनै परिवारमा पहिले कोहि नामर्द वा बाझोपन छ छैन भन्ने कुरा हेरेर
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न,- देब्रे घुँडा र दाहिने घुँडा पनि नचिन्ने चिकित्सा सेवाले कहाँ पुर्याउँछ ?
काठमाडौं । प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयसीमा भित्र काम सम्पन्न नगर्ने माथि कारवाही गर्ने बताएका छन्। वीर अस्पताल सर्जिकल भवनको शुक्रबार शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। ‘मैले
काठमाडौं, फागुन २५ । मन्त्रिपरिषद्का एकजना वरिष्ठ सदस्यले एउटै समयमा निजी क्षेत्र र सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिनुभएको छ । भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतनको